izinto kwamanye amazwe ukukhusela eliphindiweyo kabini elikhokelayo ukutyabeka - China Shandong Chen lu
Controller ukuba electronic lead isihlangu
radiation Intervenient yokhuselo ...
Protection screen steel stainless
Soft yokhuselo lead ingubo enemikhono emide kunye elide ...
protective lead rubber cap omtsha chen lu nga b ...
Uhlobo olutsha esingxotyeni lead yokhuselo akanayo sleeve
Chen lu elitsha semi-kwisingxobo-lubangelwe enye anti-ra ...
izinto kwamanye amazwe ukukhusela ukutyabeka kabini-Amasa phambili
HD02 gel phambili (kwicala kabini mbeje) 1, umsebenzi: ibizwa ikakhulu isetyenziselwa ukukhusela X ray, unako ngokutsho abasebenzisi kufuneka ikakhulu sisetyenziselwa ukhuseleko kwimitha (X, gamma, ukhuseleko), umsebenzisi akanokukwazi mazikhethe ngokwezi udinga iimveliso yokhuseleko uthotho kwemigaqo ezahlukeneyo (ukhuseleko wesigrike 0.5 MMPB reyi bakhetha ngokubanzi). 2. Uhlobo: sleeve elide icala kabini, ukhuseleko kakhulu olubanzi; 3. Iimathiriyeli: American amazwe elikhokelayo irabha 4. International uhlobo olutsha lwe le zokhuselo ...
Esilingana Lead: 0.35/0.5/0.75mmpb
indima: ukhuseleko kwimitha
impahla: lead yerabha
HD02 gel phambili (kwicala kabini mbeje)
1, umsebenzi: ibizwa ikakhulu isetyenziselwa ukukhusela X ray, unako ngokutsho abasebenzisi kufuneka ikakhulu sisetyenziselwa ukhuseleko kwimitha (X, gamma, ukhuseleko), umsebenzisi akanokukwazi mazikhethe ngokwezi udinga iimveliso yokhuseleko uthotho kwemigaqo ezahlukeneyo (ukhuseleko wesigrike 0.5 MMPB reyi bakhetha ngokubanzi).
2. Uhlobo: sleeve elide icala kabini, ukhuseleko kakhulu olubanzi;
3. Iimathiriyeli: American amazwe elikhokelayo yerabha
4. International uhlobo olutsha lwe zokuzikhusela lead yesikhumba, i-international ephambili ultra-ukukhanya, ultra-zingcakacile, izinto ultra-soft protective; Ethelekiswa ingubo eliphambili eziqhelekileyo, ubunzima xa kuthelekiswa ka-25 ukuya kuma-30 ekhulwini na lincitshiswe.
5. ukusebenza ukhuseleko Good, ukwabiwa yipeyinti kakhulu uniform, ukusetyenziswa okuqhelekileyo lead elingana akayi ukuphuphumala;
6. Ukubonelela 0,35 / 0.5mmPb elingana phambili; Nxiba-nemithi, izinto kumphezulu lula-to-ecocekileyo ukukhusela utyalo-mali yakho inani;
Iimveliso zethu eziphambili:
Ukuphepha komzimba Human iimveliso eziphambili: X-ray elikhokelayo impahla yokhuseleko impahla, X-reyi isondo yokhuselo, kukhokelela iiglasi, isikhafu ekhokelayo, cap ekhokelayo, iiglavu ilothe, kukhokelela iiglavu, ukhuseleko gonadal, ukhuseleko ibele, unogada ngesandla, umkhono ukhuselo , njl
iimveliso eziphambili izixhobo zokuzikhusela: mobile ilothe screen, lanqunyanyiswa elikhokelayo screen, ikhuselo ukhuko, ilothe kwekhuselo mobile, iglasi abaphambili kunye nezinto ezinxulumene abangabancedani.
Yenziwe irabha zendalo danpowder emthubi yi processing kunye ilaphu okufowuna. Ingaphakathi multi-inwebu izinto ezintsha yokhuselo, ukwabiwa yipeyinti ewe, intsebenzo ukhuselo ilungile, nokukhanya ethambileyo, akukho lula zaphuka;
Eli laphu Ingaphandle ixesha elide yaye ixesha elide, kwaye amanzi kunye antistatic. Kuyinto ekulula ukuzicoca nokubulala iintsholongwane.
Oku kakuhle yenzelwe, nendlela kunye izele ezahlukahlukeneyo, nto leyo eyenza ukuba ukhululekile kwaye likhululekile phakathi imbonakalo.
Indlela uhlolo Product (1) imveliso ngo 80 KVP, mas 32, 72 ubude phantsi imeko X-reyi iifoto, uze ugcine iifoto ifilimu, zefilimu X-ray, ukuba ubukhulu window, wathi ukwanda Ebubanzini eziphathekayo, ukufunxa imitha yomelele. (2) ukuba ibonakala mnyama, i Ebubanzini zokufunda kwisiza kutshintshwe. (3) ukuba ngohlangothi ndawo emnyama icacile, kusenokuba ngenxa yomonakalo umbandela lwangaphakathi yokhuselo, nto leyo idla kubangelwa ukusetyenziswa ezingachanekanga iimpahla zokuzikhusela. (4) xa kukho imali encinci amabala emnyama, oveliswa ngexesha ukuvelisa iimpahla zokuzikhusela, ezifana pinhole. Oku kubonakaliswa bubungqina onyango ukuba ndawo emnyama enobubanzi engekho ngaphezulu kwe 5mm akuyi kuchaphazela isiphumo olukhuselayo. Ukuba kukho inani amabala ezimnyama ezinkulu kuno 5mm zifunyanwa, okanye iindawo ezininzi ezincinci kwaye kumnyama kufuneka waphawula, kufanele kuphawulwe. (5) ukuba kukho shadow elide, loo nto ibonisa ukuba irabha elikhokelayo lowanyathela kule ndawo, nto leyo ebangelwe yokugcina ngokungafanelekanga iimpahla zokuzikhusela. Isondlo Product (1) le mveliso kufuneka ukuba libekwe kwindawo enelanga, beka kude nobushushu, kwaye ayikwazi ukuqhagamshelana kunye nezinye iimveliso ezifana ipeyinti, acid, kwealkali, njl (2) le mveliso kufuneka igcinwe kakuhle umoya nendawo epholileyo neyomileyo. Iqondo lobushushu Iqondo lobushushu lihle laya 0-30, kunye nezinga lobushushu isihlobo 80%. HC06 anti-ndinxibe olunye-kabini elikhokelayo ingubo yangaphantsi: super ezithambileyo uhlobo elikhokelayo yerabha: nokuba umzimba Uhlobo elikhokelayo isiqulatho: 025, 035, 05mmpb; Model: L, M, S; Ububanzi yesicelo: esetyenziselwa moshilongo zeradiyoloji wokhuseleko komzimba womntu. Iminyaka yokusetyenziswa: elo lizwe ixesha eliqingqiweyo kwiminyaka 4-5, elingaphezu ubude ukusetyenziswa okanye nezihlandlo ukusetyenziswa, kwaye jonga isiphumo sokhuselo isuti yokhuselo ngokwayo. Khangela indlela: sebenzisa isandla tyaba ukubamba okanye ukususa ngelaphu umphezulu, ubonwa amandla iliso, ukuba kukho kwisithathu nditshaye, imveliso awukwazi ukuyisebenzisa, kufuneka kuyekwe uhlaziyo. Ukuba kakutsha ithamo sokuqeqeshelwa ukubona ubungakanani eziphango radiation, kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba iimveliso zokuzikhusela kufuneka itshintshwe.
Previous: Chen lu embalwa izixhobo zokhuselo elikhokelayo ibhatyi isiqingatha - sleeve double - sleeve
Okulandelayo: vests abakhokelayo zokuzikhusela zabasebenzi abagcina izinto kwamanye amazwe ungenziwa ngemfuneko nge 0.5 elilingana phambili.
0.25mmpb Baphile Iimpahla Price
2017 Entsha Uhlobo Fashion Lead Lixabiso elibala
Anti Radiation elibala Lead
China Factory Supply Umbala Elungiselelweyo X-Ray zokhuseleko Idlala ikhola Ngokuba Neck
Custom Made Lead zerabha Isifuba Ukukhusela
nezinto ozithandayo New Design Lixabiso X Ray Imitha kukhuseleko Lead elibala
nezinto ozithandayo X-Ray Protection ndikhaphe Vest
Dental zokhuseleko X-Ray Esondweni
Dental X-Ray ndikhaphe elibala
Good ixabiso Lead rubber X Protection Ray ingubo No sleeve elibala
HD13 Intervenient Imitha Iziqhano kukhuseleko
Ubunjani High ndikhaphe elibala
Ubunjani High Baphile Iimpahla
Mkhupheleni ifaskoti X Protection Ray
Lead irabha Sheet
ezincinane iiqhiya Lead
Medical zokhuseleko ndikhaphe zokhuseleko elibala
Medical Radiation zokhuseleko Accessories Products X-Ray ndikhaphe elibala
Medical Rediation zokhuseleko ndikhaphe elibala leposi
Medical X-Ray Impahla zokhuseleko
Isiyillo zokhuseleko X Ray ndikhaphe elibala
Protection x-reyi elikhokelayo elibala
Radiation Protection ndikhaphe elibala Price
X Ray Baphile Iimpahla
X Ray zokhuseleko elibala
X Ray kukhuseleko Lead iiqhiya
X Ray impahla zokhuseleko Lead
X Ray kukhuseleko Lead Vest
X Ray Imitha Iimpahla Lead
X Ray Shiled Lead zokhuseleko elibala leposi
X-Ray ndikhaphe elibala
X-Ray Lead elibala Sale
X-Ray Protection ndikhaphe elibala
X-Ray zothintelo iiqhiya nemibhinqo
X-Ray zokhuseleko Impahla
X-Ray Impahla zokhuseleko
X -Ray zothintelo Lead elibala
X-Ray Iziqhano kukhuseleko Lead
X-ray radiation zokhuselo ilothe elibala
X-Ray Radiation zokhuseleko X-Ray Lead zerabha Sheet
X-Ray ayikhusele ndikhaphe elibala
umphetho Soft yokhuselo
I-soft yokhuselo itanki yipeyinti anti-banxibe
okubi Lead zokusasaza okhokelayo ultra-ezithambileyo ...